GetEmails: Ziva Kusvikira ku35% Yako Asingazivikanwe Webhu Traffic uye Kurisa Yako Email Rondedzero | Martech Zone
GetEmails: Ziva Kusvikira ku35% Yako Asingazivikanwe Webhu Traffic uye Kurisa Yako Email Rondedzero
Chishanu, February 28, 2020 Chitatu, December 23, 2020 Douglas Karr
Email Kushambadzira kunoenderera kuve iri yepamusoro ROI dhijitari chiteshi pachiyero che38: 1 zvinoenderana nekudzidza na Litmus. Iyo inokurumidza nzira yekukura mune yedhijitari pasipasi ndeyekukura yako email runyorwa nevabatanidzwe, yakanangana nevanoonana
Kuwana iwo maemail kero hakusi nyore. Vashambadziri vanoshandisa yakawanda kutyaira traffic kune avo mawebhusaiti nekubhadhara kwakabhadharwa, SEM, SEO, uye PR, uye vanongopedzisira vatora email kero kubva kungangoita 5% yeavo vashanyi.
Uyezve, vashambadziri vanoda imwe nzira inodhura-yekugadzirisa vashanyi vewebhu. Facebook uye kuratidza kudzokorodza zvinoshanda, asi zvinodhura uye hausi wega traffic. Vatengesi vanobva vabhadhara zvakare uye zvakare kuti vadzosere iyo traffic kumawebhusayithi avo.
Iyo GetEmails Email-Yakavakirwa Kudzosera Solution Ongororo
GetEmails inopa software-se-se-sevhisi, gore-rakavakirwa Email-Yakavakirwa Kudzokorora mhinduro inobvumidza vashambadziri kuziva uye kutora kusvika ku35% yeavo asingazivikanwe webhu traffic uye vawane maemail kero ayo asati ave pane avo runyorwa.
Kune vanobatana vanounganidzwa, GetEmails inopa iyo email, zita rekutanga, zita rekupedzisira, tsamba yepositi, uye peji rekumhara, uye inosangana zvakananga neese makuru maEvhisi Service Provider (saKlayiyo, ActiveCampaign, uye Mailchimp).
GetEmails inotumira vashambadzi marekodhi ekutaurirana avasina, izvo zvinovatendera kuti vadzokerezve vashanyi vewebhu kuburikidza neemail uye vatumire tsamba kune chikamu chemutengo wekuwana maemail kuburikidza nemikana yemagariro. Yakazara marekodhi ekutaurirana anotanga pamasendi makumi maviri neshanu pane rekodhi, uye aya akanyanya kunangana, vanobatana zvakanyanya vane huwandu hwepakati hwakavhurika hweanosvika makumi maviri kusvika makumi maviri muzana. Vatengesi havambobhadhara rekodhi kaviri, uye havabhadhare marekodhi avanotova nawo.
Tanga ne GetEmails mahara
Hapana kiredhiti kadhi inodikanwa, hapana zvibvumirano, uye iwe unogona kukwidziridza, kudzikisira, kana kukanzura chero nguva.
GetEmails: Iyo Yepamutemo Ongororo
GetEmails zviri pamutemo muUSA. Ndizvo kwete GDPR kana CASL inoenderana, saka tekinoroji haiwanikwi muEurope kana Canada. Iyo GetEmails dhatabhesi chete ine vekuAmerica mairi.
Kupesana nekutenda kwakakurumbira, mutemo weUS CAN-SPAM unobuda, pane kusarudza-kupinda. Izvi zvinoreva kuti chero bedzi iwe uchipa vanogamuchira mukana wekusarudza-kubva mukugamuchira email, iwe UNOGONA-SPAM inoenderana. Nezve mirayiridzo kubva kuFTC pamutemo weUS CAN-SPAM, tinya pano.
Ko zvakadii neCalifornia Consumer Protection Act (CCPA)? Nepo zvimwe zvikamu zveCCPA zvakafanana neGDPR, CCPA iri kwete nezve opt-in Email Kushambadzira. CCPA iri pamusoro pekuzivisa kune vatengi uye neyakavanzika mutemo kuchinja. GetEmails is CCPA inoenderana, chero vashambadziri vanoita shanduko yekuvanzika yekuvanzika.
Click pano yeiyo GetEmails packet yepamutemo, yakagadzirirwa kuti igovaniswe neboka rako rezvemitemo.
Email-Yakavakirwa Kudzokororazve Akanaka Maitiro
Email Kushambadzira kuri nezve kuburitsa, hunyanzvi nesainzi yekuwana email kuinbox. Kununurwa kuri nezve kubatanidzwa: yakakwira yakavhurwa mitero, yakakwira tinya mareti, akaderera mabhureki, uye zvichemo zvakaderera
Email-Yakavakirwa Kudzoserwa, kana ikaitwa nenzira kwayo, ine kugona kukuru. Heano mamwe maitiro akanakisa:
Tumira a Kutenda nekumira nenzvimbo e
Kune ecommerce brand, shandisa yako yakajairika yekugamuchira nhevedzano, asi shandisa uyu musoro wenyaya kune yekutanga email
Kune vaparidzi, tumira email neiyi nyaya mutsara uye zvimwe zvemukati menyu zvemukati
Mushure mekugamuchira email email, wedzera ivo kune yako yenguva dzose tsamba yekutumira
Usamirira kutumira kune aya mahwekwe; gadzira otomatiki iyo inotumira iyo inogamuchirwa email nekukurumidza kana iwe uchinge wagamuchira iyo data
Mamiriro ezvinhu chete apo GetEmails yakaona matambudziko nezvichemo kana vatengesi vamirira vhiki mbiri kana kupfuura kutumira
Tumira paunenge uri pamusoro wepfungwa, usamirira kuti mutengi akanganwe zita rako
Heino vhidhiyo nezve izvo zvekutumira chaizvo, pamwe nemienzaniso mishoma:
Mashandiro anoita GetEmails: Infographic
Mashandiro anoita maEmeile: Nyaya Dzemusoro
Email-Based Retargeting inobatsira ecommerce brands kukura kwavo runyorwa pamubhadharo wemutengo weemail adhiresi akawanikwa kubva kumagariro nzira.
Freida Rothman akaona 10x ROI paChishanu Chishanu. Vakagamuchira magwara kubva kuGetEmails kwemasendi makumi maviri nemashanu, uye vakabhadhara avhareji mutengo we $ 25 paFacebook ne Instagram. Iyo GetEmails inotungamira ndiyo yega nzira inotungamira.
Freida Rothman Nyaya Yekudzidza
GetEmails anobatsira vaparidzi kukurisa yavo yeemail zvinyorwa nevakabatana vanobatana uye kurwisa chisingaperi chinokwezva chinetso chese muparidzi zviitiko.
Prophecy News Watch vakawana vanoshanda vanodzvanya kwe20% pasi peyavakange vachibhadhara kune vanonyorera kuburikidza nemagariro nzira pane avo ekutanga mazuva makumi matanhatu. Mhedzisiro yavo yaisanganisira 60 kero dzeemail dzakagamuchirwa, makumi maviri emaimeri akavhurwa (45,000% yakavhurika rate) uye 20,000 yekudzvanya-kuburikidza (45% yekudzvanya-kuburikidza chiyero)
Chiporofita Nhau Tarisa Nyaya Yekudzidza
Chirongwa chePfumbamwe-Chinongedzo chekushandura Yako B4B Vatengi kuva Brand Evhangeri
Trendy Tech uye Huru Dhata: Chii chekutarisa kunze kweKushambadzira kweMusika mu2020